Izvo zvisingadiwe zvave kudikanwa - chikamu 2 | Apg29
Yekutanga Baptist Baptist Pentekosti 150.
Paunoona Christer Åberg arikuita nhasi, semuenzaniso neake blog saiti www.apg29.nu, huchenjeri hwake uye kupinza kwake kwechitendero - zvinenge zvisinganzwisisike kunzwisisa kuti iye, pamberi pechiitiko chake cheruponeso, aive nekurambwa kwakadzika.
Kubva kuBaptist Pentecostal tsamba 150
Pano mune yechipiri info tsamba ine makotesheni kubva mubhuku raChrister Åberg "Izvo Zvisingadiwe", dingindira ndiko kubhabhatidza kwaChristian mumvura uye rubhabhatidzo muMweya Mutsvene. Chitsauko chekutanga chebhuku chinonzi "Rima" uye chinotanga nenzira inotevera (peji 11): "Ini ndakanga ndisati ndambonzwa muhupenyu hwangu kudiwa, kukosha kana kudiwa. Naizvozvo, hapana imwe nzira yandakaona kunze kwekungopedza hupenyu hwangu pakati pevanhu vasingadiwe, makore 17.5. "
Kuseri kwemifungo yakasviba, kurara pakati pezvimwe zvinhu kuchengetwa kwekuchengetwa uye vanoverengeka vanoshusha. Papeji 85 yebhuku racho, Christer anonyora kuti: “Chaizvoizvo, ndaive mwana anofara aive pedyo nekuseka. Amai vangu vokurera vakanga vambondiudza pandaive munhu mukuru, vasati vanyanyo shaya pfungwa, kuti ndakanga ndatungamira nekuseka munhu wese pandakatanga kuuya kwavari munyika. Asi nekuda kwekukachidzwa uye kuora mwoyo kwandaizosangana nako kumba, kuchikoro uye nenguva yangu yekusununguka, handina kuzopedzisira ndave mwana anofara. Kutya kwangu kwakanyatsojeka kubudikidza neni. ”
Paunoona Christer Åberg arikuita nhasi, semuenzaniso neake blog saiti www.apg29.nu, huchenjeri hwake uye kupinza kwake kwechitendero - zvinenge zvisinganzwisisike kunzwisisa kuti iye, pamberi pechiitiko chake cheruponeso, aive nekurambwa kwakadzika. Yake yega karate kudzidzisa uye kudzidzisa vamwe, zvakamubatsira kune imwe nhanho mukunyadziswa kwese.
KUBHABHATIDZWA MUMVURA NOMWEYA
Asi ikozvino kune kuenderera munzira yeruponeso, ndiko kuti, nerubhabhatidzo rwemvura uye rubhabhatidzo neMweya Mutsvene. Makotesheni kubva pamapeji 142-145:
“Ndakanga ndarava muBhaibheri pamusoro porubhapatidzo. Ndakaona kuti ndinofanira kubhabhatidzwa munaKristu muzita raBaba, neMwanakomana, neMweya Mutsvene. Ndakanga ndisingazive zvakawanda nezvazvo, asi paive nechimwe chinhu mukati mangu chaiti: "Ini ndoda kubhabhatidzwa!" kufunga nezve. Asi ini handina kunzwisisa kuti ikozvino ndakatenda muna Jesu uye nekudaro ndinoda kubhabhatidzwa. Ini ndaive nekutya kukuru kuti Svondo manheru muLjungby Pentecostal chechi pandakanga ndichizobhabhatidzwa. Wakanga uri Ndira, mwedzi mishoma mushure mekunge ndaponeswa. Pekupaka panze pakanga pakazara motokari dzakawanda uye mukati mekereke makanga makazara vanhu. Horo yechechi yose yakanga yakazara uye kunyange mupurupiti. Aive ini uye mukomana mudiki ane makore gumi ekuberekwa aifanira kubhabhatidzwa.
Isu takange takapfeka nguwo chena zvaitaridza kuti isu tave takachena muna Kristu Jesu. Haufanire kupfeka nguwo chena. Zvinofamba zvakanaka mune zvipfeko zvakajairika, asi ndizvo zvavaimboita mukereke iyoyo. Takabhabhatidzirwa mudziva diki rakanga rakavanzwa pasi pepasi padariro pamberi peimba yechechi. Vakanga vabvisa pasi pevhu ndokuzadza dziva nemvura inonzi yekubhabhatidza font. Zvinomiririra kuti munhu anoviga hupenyu hwake hwekare naKristu uye anomuka munaKristu aine nyowani.
Mukomana akatanga kubhapatidzwa nababa vake, mufundisi wechidiki. Ipapo ndakadzika ndakadzika mumvura pane manera madiki. Johnny akamira mumvura akanditambira. Ndisati ndabhabhatidzwa, ndakaona kuti munhu wese aive akanditarisa. Ndakashamisika kuti sei vakatarisa zvakadaro, asi ndakazoona kuti izvo zviri kuitika izvozvi chishamiso chikuru uye chinoshamisa, sezvazvinowanzoitika kana mumwe munhu afunga kutevera Jesu uye kubhabhatidzwa muzita rake. Mufundisi wechidiki akati kwandiri zvinonzwika uye zvakajeka kuti munhu wese anzwe: tPaTenzi wangu nekuraira kwako, ndinokubhabhatidza munaKristu muzita raBaba nereMwanakomana nereMweya Mutsvene! yakavharwa uye akabva andipeta zvakare kuitira kuti mvura yese iyerere muhova dzakapararira. Uye zvino ndakabhabhatidzwa nenzira yemubhaibheri inodzidziswa uye inotaurwa nezvayo neTestamente Itsva…
Pamusangano (gare gare, tsamba yangu), ndakanzwa mukadzi akwegura achinamata mune mumwe mutauro. Ainge akagara kuseri kwemba saka ndaisakwanisa kuona kuti aive ani… Saka handizive nhasi kuti ndiani akanamata nemumwe mutauro. Ini handina kunzwisisa kuti sei aisanyengetera muchiSweden. Zvainzwika kunge chiFinnish saka ndakafunga kuti pamwe aibva kuFinland. Gare gare ndaizonzwisisa kuti akaruma rurimi rwake. Bhaibheri rinodzidzisa kuti kana munhu apfidza uye akabhabhatidzwa, anofanira kugamuchira Mweya Mutsvene sechipo. Ndipo paunogona kutaura nendimi. Rurimi kutaura mutauro wekunamatira kuna Mwari. Kugamuchira Mweya Mutsvene sechipo kunodaidzwawo kunzi Kubhabhatidza kweMweya. Uye zvino ndaida kubhabhatidzwa muMweya Mutsvene uye nokutaura nendimi. Asi ndakanga ndisingazive kuti zvaizofamba sei… Ipapo ndakatenga bhuku rinonzi “Hupenyu Hutsva hweMweya” hwandakawana muchitoro chemabhuku chechechi yePentekosti pamusuwo.
Akanyora mubhuku kuti Mweya Mutsvene unopihwa. Jesu akatumira Mweya Mutsvene pazuva rePentekosti, makore zviuru zviviri apfuura. Uye zvino kwaingova kumugamuchira nekutenda nekuti aive chipo. Unogara uchigamuchira chipo, zvikasadaro haugamuchire chipo. Akanyora kuti tanga wagamuchira Mweya Mutsvene uye wobva wavhura muromo wako wotanga kutaura nendimi. Ndakafunga kuyedza. Pamba ndiri mumba mangu, ndaipfugama pamubhedha wangu, sezvandaigara ndichiita pandainamata panguva iyoyo. Uye saka ndakagamuchira Mweya Mutsvene mukutenda, ndikatenda Mwari, ndikashama muromo wangu ndikatanga kutaura nendimi. Zvakashanda! Kubva panguva iyoyo zvichienda mberi, ndakabhabhatidzwa muMweya Mutsvene uye ndikakwanisa kutaura nendimi. Zvino, nematanho ekuedza, ndanga ndatanga kufamba kwekutenda mukutevera kwangu kwaJesu Kristu. ”